बाबुराम-उपेन्द्रले महन्तका तीन सांसद लुकाए – नेता बस्नेत – हाम्रो देश
बाबुराम-उपेन्द्रले महन्तका तीन सांसद लुकाए – नेता बस्नेत
काठमाडौं । आज नेकपा (एमाले) का युवा नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्र यादबलाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नहटाई नभएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत नेता बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्। उनले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको दबाबमा कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व नलिई नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्।उनले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुारम भट्टराईप्रति पनि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
उनले लेखेका छन्-‘आज बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरुले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाइ समर्थन गर्ने तीन जना साँसदहरुलाइ कहाँ लुकाएर राख्नु भएको छ ? के तिनीहरु अपहरणमा परेका होइनन ? लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूलाइ घरी एउटा निर्णय घरी अर्को निर्णय गरेर पार्टीको कुनै निर्णय बिना फेक हस्ताक्षर गरेर चार जना साथीहरुको सांसद पद खाएर कसको स्वार्थको लागि कस्को सेवा गरिरहनु भएको छ ? बाबुरामको मनमा लुकेको प्रधानमन्त्रीको चाहना र उपेन्द्रको मनमा रहेको उपप्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्री पाउने सत्ता स्वार्थको लागि यस्त हर्कत किन गर्नु भएको छ?’